काठमाडौः उपत्यकाको प्रदूसणले काठमाडौँमा क्षयरोगीको संख्या पनि बढ्को जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनायो । प्रदूषणले समस्या फोक्सो कमजाेर बनाउने र रुघाखोकी मुटुरोग बढाएकाले क्षयरोगी बढेको जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर महेन्द्र बिष्टले बताए । प्रदूषणले बढी खोक्नु पर्दा क्षयरोगका किटाणु सकिृय हुने गर्छ र नयाँ क्षयरोगी विरामी बढ्ने, पुराना विरामीमा समेत औषधीको प्रभाव कम हुनाले बिरामी बढ्ने गरेको उनले बताए।
प्रदूषणले रोग पचाउने बचाउने क्षमता घटाउने गरेको डाक्टरले बिष्टले बताए । फोक्सो कम्जोर बनाउने भएकाले औषधीले काम नगर्नु र विरामीले नियमीत औषधी प्रयोग नगर्नुनै क्षयरोगीको संख्या बढेको उनले बताए । प्रदूषणले नयाँ विरामी, औषधी खादै गरेका र पुराना बल्झीएका क्षयरोगी बढेको उनले दावी गरे । गत चैत्र देखि असार सम्म एक हजार एक सय ५७ र साउन देखि कात्तिक सम्ममा एक हजार दूई सय ६३ गरी दूई हजार चार सय २० नयाँ विरामी थपिएको तथ्याङक सार्वजनिक गरे । काठमाडौमा नियमीत औषधी खाने दूई सय र दूई हजार ६ सय क्षयरोगीले उपचार लिदै आएको छ ।
काठमाडौका क्षयरोग शाखाका प्रमुख चित्रजंग शाही रोगी अघिल्लो तथ्याङक भन्दा बढी भएको बताए । रोग नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, लगानी र औषधी प्रयोगकर्तालाई हेर्दा क्षयरोगीको संख्या प्रदूसणले बढाएको उनको भनाई छ । देशभर ३५ हजार क्षयरोगी मध्ये १० प्रतिशत अर्थत तीन हजार पाँच सय विरामी काठमाडौमा भएको जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनायो । यो तथ्याङक सुदूरपश्चिमको भन्दा काठमाडौमा क्षयरोगीको संख्या बढी हो । एक महिनामा एक हजार तीन सय सम्म र बार्षिक दूई हजार सात सय विरामी फेला परेको तथ्याङक काठमाडौमा छ ।
शरिरको कपाल र अन्य रौ मा भन्दा बाहेक सबैमा क्षयरोग हुने हुने डाक्टर बिष्टले बताए । सर्ने क्षयरोग फोक्सोसँग सम्बन्धीत हुन्छ भने नसर्ने शरीरका अन्य भागसँग सम्बन्धीत हुने डाक्टर बिष्टले भनाई छ । क्षयरोग नियन्त्रणमा विरामी पक्ता लगाउन आवस्यक बजेट र सरकारको स्पष्ट धारणा खाँचो भएको डाक्टर बिष्टले बताए । क्षयरोगी मध्ये ४१ प्रतिशत सर्ने, ४४ प्रतिशत नसर्ने र बाँकी नियमीत औषधी नलिने बिरामी रहेको कार्यालयले जनायो । डाक्टरका अनुसार ४५ प्रतिशत मानिसमा क्षयरोगका किटाणु हुन्छ ।
फोक्सोसँग सम्बन्धीत नयाँ क्षयरोगीले एक बर्षमा १५ जनालाई रोग सार्ने र विरामीले नियमीत औषधी नखानु नियन्त्रणको मुख्य चुनौती भएको भएको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउछन । जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौको तथ्याङक अनुसार १५ देखि २४ बर्ष उमेरसमुहमा आठ सय ६४ जना सबै भन्दा बढी रोगी देखिएको र ६५ बर्ष माथि एक सय ४८ जना देखिएको छ । ८६ प्रतिशतले विरामीले मात्र पुर्णऔषधी खाने गरेको छ । निशुल्क औषधी गर्न पाइने भए पनि विरामीले रोगलाई निर्मुल पार्न चासो नदिएको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ ।
काठमाडौमा एचआइभी संक्रमीतको संख्या बढेकाले क्षयरोगी बढेको छ । टेकुको एक अस्पतालमा मात्र एक हजार सात सय एचआइभी संक्रमीतले उपचार लिदै आउनु क्षयरोगको लागि चुनौती थपिएको कार्यालयको भनाई छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाले सात सय रोगीलाई होल्ड गरी अनियमीत औषधी बिक्री गरी झन बिरामी बनाएको रोगीको संख्या कम गर्न समस्या भएको जनस्वास्थ्य कार्यालयका क्षयरोग शाखा प्रमुख शाहीले बताए । काठमाडौमा ९० प्रतिशत सम्म सडक वालवालिका र उद्योगका मजुदरमा क्षयरोग फेला परेको छ । यि विरामीले नियमीत औषधी नखाइदिदाँ क्षयरोग नियन्त्रणमा समस्या भएको जनायो ।
काठमाडौमा एचआइभी संक्रमीतको संख्या बढेकाले क्षयरोगी बढेको छ । टेकुको एक अस्पतालमा मात्र एक हजार सात सय एचआइभी संक्रमीतले उपचार लिदै आउनु क्षयरोगको लागि चुनौती थपिएको कार्यालयको भनाई छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाले सात सय रोगीलाई होल्ड गरी अनियमीत औषधी बिक्री गरी झन बिरामी बनाएको रोगीको संख्या कम गर्न समस्या भएको जनस्वास्थ्य कार्यालयका क्षयरोग शाखा प्रमुख शाहीले बताए । काठमाडौमा ९० प्रतिशत सम्म सडक वालवालिका र उद्योगका मजुदरमा क्षयरोग फेला परेको छ । यि विरामीले नियमीत औषधी नखाइदिदाँ क्षयरोग नियन्त्रणमा समस्या भएको जनायो । अन्नपूर्ण पाेष्ट
क्षयरोगी बढ्नुका थप कारण
. नयाँ क्षयरोगीले एक बर्षमा १५ जनालाई रोग सार्ने
. बिरामीले नियमीत औषधी नखानु
. प्रदूसणले फोक्सो कम्जोर बनाउनु, रुघाखोकी, मुटुरोगी बढ्नु र औषधीले काम नदिदाँ किटाणु फैलनु
. १५ देखि २४ बर्ष उमेरसमुहमा बढी रोगी देखिनु
. विरामी सम्पर्कमा नआउनु
. क्षयरोग बारे वेवास्ता गर्नु
. एचआइभी संक्रमीत बड्नु